Kuchenesa neYahoo! | Martech Zone
Muvhuro, October 29, 2007 China, July 18, 2013 Douglas Karr
Mangwanani ano ndawana a Yakawanda email fomu yekunyorera yeYahoo! Icho hachiratidzike kunge chakasimba kunge chirongwa icho iyo AOL postmasters vaisa mukana wekunyorera kune avo Vanoziva asi ndinofara pakupedzisira kuwana imwe!
Mamwe mazano usati waisa chikumbiro:
Ive neshuwa kuti wakadzosera DNS yekutarisa inogoneswa pa IP Kero iwe yauri kutumira kubva. Regai Yahoo! ziva iyo IP Kero iyo iwe yauchange uchitumira kubva mune yekuendesa fomu (munzvimbo yekuwedzera).
Ive neshuwa kuti une chirevo chekutenderera kweIPP kupindura kumeseji ane nyaya (semuenzaniso abuse@yourcompany.com) uye gadza musoro weemail we "Zvikanganiso-Ku:" pakero ino yeemail. Regai Yahoo! ziva yako yekutaurisa loop email kero mune yekutumira fomu (mune yekuwedzera info nzvimbo).
Ive neshuwa yekuwedzera yako yakazara kambani kero, guta, nyika, zip, nhamba yefoni uye nhamba yefakisi mune yekuwedzera info nzvimbo zvakare.
Kana iwe uri kutumira akawanda mavhoriyamu emaema, ini ndinokurudzira zvikuru kuti iwe uwane pane whitelist ye Yahoo! uye AOL. Muchena haavimbise kuti iwe unogadzira iyo inbox, zvirimo zvinogona kuramba zvichikuendesa mune spam firita. Muchena haakuregedze kubva pakuvharirwa, chero, asi zvinokupa imwe inishuwarenzi yakati kuti izvo hazviitike.
Kudzivirirwa kwakanyanya kubva pakusatorerwa mazita ndekubvisa maadresi eemail kubva pane yako runyorwa, gara uchiwana mvumo, uye gara uchitumira iyo email nenzira inowirirana - inowirirana neapo iwe wabvunza mvumo. Ini handisi chipangamazano wekuburitsa - asi ndine shamwari yakanaka iriko uye inobatsira kundichengeta ndakanangana nezvinhu izvi!
Mbudzi 26, 2007 na11: 24 PM
Nhanho yakanaka, iwe unozoida. Vanhu vazhinji havambonzwa chero chinhu zvakare maererano nezvavanokumbira. Ini pachangu ndakatumira mafomu emasangano ese akasiyana, kwerinopfuura gore, pasina mhinduro imwe chete. Sezviri pachena izvi zvakajairwa bhizinesi maitiro eYahoo. Isu tinoteedzera ese maindasitiri maitiro akanakisa uye tinotosaina maemail ese anobuda neDK neDKIM… zvakadaro hapana kubudirira. Ive neshuwa yekutumira kumashure kana iwe ukatambirwa !!
Feb 12, 2008 at 3:40 PM
Izvo zvakanaka pandakaiyedza mukupera kwegore rapfuura ndakave nemhinduro kubva kuYahoo uye ndikazoiwana yakachena.
Nekudaro, sezvo paine shanduko neIP kero, ini ndakaedza rombo rangu zvakare uye zvaiita kunge hazvishande. Fomu racho rakabviswawo!